गयो त गयो, ऊ गयो ! कसलाई के भयो ? | EduKhabar
गयो त गयो, ऊ गयो ! कसलाई के भयो ?
- अभिभावकलाई अङ्ग्रेजी चाहियो र निजी तिर लागे अब सामुदायिकमा पनि अङ्ग्रेजी पढाउँ ।
- सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ नै भएन, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।
- सामुदायिकका शिक्षकले ध्यान दिएर पढाएनन, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।
- अभिभावकले पनि स्कुलमा ध्यान दिएनन, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।
- अरु सरोकारवालाले पनि वास्तै गरेनन, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।
- दुईवटा वर्ग उत्पादन भयो, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।
- सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन त खतमै छ, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।
- सामुदायिकको नतिजा पनि साह्रै बिग्रियो, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।
- सामुदायिक विद्यालय सुधारमा सरकारको ध्यान पुगेन, अब अङ्ग्रेजी पढाउँ ।
सामुदायिक विद्यालय भनौँ वा सामुदायिक शिक्षा सुधारको एक राम वाण अङ्ग्रेजी माध्यम आयो । यो विस्तारै वनमारा जस्तै झाङ्गिदै र फैलिदै छ । स्थानीय सरकारहरुबाट कडा निर्देशन जारी भएको छ, अनिवार्य अङ्ग्रेजी माध्यम । तिमी सक्दिन भन्न पाउँदैनौ । लामो समयदेखि काठमाडांैमा बसेको सरकार गाउँ गाउँ गयो अब विद्यालयले म गर्दिन भन्न पनि नसक्ने भयो, गर्न पनि नसक्ने भयो अनि अहिले अङ्ग्रेजी अपहत्ते भएको छ ।
भर्ना रजिष्ट्रर हेरेर भन्नु भयो - ११ जना भर्ना भएका । कक्षामा त ६ जना रहेछन् ।
मैले धेरै बहस गर्न चाहिन र जरुरी पनि ठानिन । म यस्तो बहसका लागि गएको पनि होइन । म अर्कै काममा आएको मान्छे, यसमा किन अलमल गर्नु र ? म मेरो लक्षित काम सकाउन तर्फ लागँे । काम सकाएर फर्किने क्रममा विद्यालयको गेटमा पुगेर देखेको अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ हुने गरी भर्ना खुलेको सूचनाले कता कता जिस्काइरह्यो, प्रश्न गरिरह्यो ।
प्रकाशित मिति २०७६ साउन २२ ,बुधबार